Ụbọchị: 6 November 2019
KARDEMİR arụchaala ihe ndozi 5 na igwe nrụnye ihe ruru ọnwa 4. Etinyego ihe nkedo a na –eme ka otutu oru nkedo a. KARDEMİR Ikike nkedo na-aga n'ihu rue ihe ruru nde 3,5 nke ezubere iche [More ...]
Na onyinye onyinye mmeputa nke 2019 nke Ministri Mmeputa na Nzuzo iji kwado nkwado nke ọma na ụlọ ọrụ aka iji bulie asọmpi nke obodo anyị na iji gbaa oru ngo a rụpụtara n'ọrụ a, KARDEMİR natara “ [More ...]
Nchekwa gburugburu ebe obibi dị ka mkpa nchekwa nke ụlọ ọha na eze, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ebe a na-ewu ụlọ na ogige. Ogige nchedo gburugburu ebe obibi, n'okpuru ala [More ...]
TransportationPark kwadoro TÜRSİD; Emere nzukọ 15 nke Railway na Line Commissioner nke Association of All Rail Systems Operators (TÜRSİD) ya na nnabata nke ationgbọ njem Park A.Ş., onye enyemaka nke Kocaeli Obodo ukwu. Turkey si ngụkọta 9 si dị iche iche anāchi achi [More ...]
Onye isi ala ime obodo isi obodo nke obodo Ekrem Imamoglu, Kabatas-Mahmutbey Metro Line mechiri mmechi ime ụlọ kwuru, ihe mberede ụgbọ ala ọha na Besiktas kwuru. Imamoglu, Bgbọ ala Ọha 'Monopoly agaghị amata ohere a'. Imamoglu, ụbọchị ikpeazụ nke onye Istanbul [More ...]
Mayor İmamoğlu na-ekwupụta ụbọchị mmeghe nke Kabataş Mahmutbey Metro Line; Onye isi oche İBB Ekrem İmamoğlu kwuru okwu na mmemme mmecha nke Kabataş-Mahmutbey Metro Line nke ogologo 19. 24,5 bin na otu uzo [More ...]
Paşabahçe Ferry mere ihe akụkọ, nke na-eche ụbọchị agụba n'akụkụ ụsọ mmiri Beykoz, ga-ezute Bosphorus ọzọ site na ebumnuche nke IMM. NUMehir Hatlar was A.Ş ka eweghachiri azụmaahịa 10 nke enyere aka na obodo Beykoz nke Beykoz. [More ...]
A na-asọpụrụ China Railway Express n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè Ankara; Traingbọ okporo ígwè mbụ ga-esi na China gafee Europe site na iji Marmaray, zighachiri ọdụ ụgbọelu China Railway Express Ankara na mmemme. Minister Turhan, onye Minista Azụmaahịa Ruhsar Pekcan [More ...]
China Railway Express Na-enye ctionzọ Ọhụụ Transportgbọ njem Worldwa; China Railway Express, ụgbọ okporo ígwè mbụ na-ebu site na China gaa Europe na-eji Marmaray, 06 November 2019 ga-anọ na Ankara Gar [More ...]
KARDEMİR bidoro Mmepụta wiil na ụgbọ ala; Kardemir bidoro imepụta ụgbọ na mbugharị ụgbọ ala na mba BA318 n'okporo ụzọ ụgbọ oloko. Xdị ụgbọ okporo ígwè BA004 dị na mmepụta [More ...]
ngwa na-adịghị ọtụtụ mba na ụwa amalite Turkey! Na mgbakwunye na ndị njem na-anaghị enwecha nsogbu na ọdụ ụgbọ elu anyị; A ga-eburu ụmụ ọhụrụ, ndị dị ime na ndị ọrịa na-arịa ọrịa ọsọ ọsọ chọrọ ọsọ ọsọ ụgbọ elu! Ndị ọrụ ọdụ ụgbọ elu nke steeti [More ...]
Ọmụmụ ihe ịrịba ama nke okporo ụzọ na Alanya; Antalya Metropolitan Munners Alanya Service Unit trakt trafik otu etinyere akara akara okporo ụzọ 102 n’ebe dị iche na mpaghara 700 nke Alanya. Antalya Obodo ukwu Alanya Service Unit Traffic Sign [More ...]
Nchịkwa iwe na izi ezi nkwukọrịta maka ndị ọkwọ ụgbọ ala na Antalya; Antalya Obodo ukwu na-aga n'ihu na-azụ ndị ọrụ ya. Njikwa iwe nke Ngalaba nke Ọrụ Ndị Ọrụ na-elekọta ndị ọkwọ ụgbọala na ndị ọbịa na-ejere ndị mmadụ ozi [More ...]